Shariif Xasan oo Mooshin Laga Keenay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Shariif Xasan oo Mooshin Laga Keenay
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xildhibaanada maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya ay diyaarinayaan mooshin ka dhan ah madaxweynaha maamulkaas Shariif Xasan Sh Aadan.
Xildhibaanada Maamulka Koofur Galbeed oo gaaraya 145 xubnood, laakiin inta badan xildhibaanadaas ayaa diyaarinaya mooshin ka dhan ah Shariif Xasan.
Warka ayaa intaas ku daraya in 85 kamid ah xildhibaanada Koofur Galbeed ay saxiixeen mooshinka xilka looga qaadayo Shariif Xasan.
Waa Maxay Sababta Mooshinka loo keenayo?
Shariif Xasan Sh Aadan ayaa ku hungoobay siyaasadiisii musharaxnimo ee Soomaaliya, waxaana ay xildhibaanada maamulkaas iyo qaar kamid ah wasiiradiisa ku eedeeyeen inuu lacag badan lunsaday.
Ilaa SEDEX Milyan ayay Xildhibaanadu sheegeen inuu lunsaday Shariif Xasan taas oo uu u isticmaalay Federaalka iyo doorashadii uu ku guuldareystay inuu ka qeyb galo maadaama ay saami ahaan uheleen gudoomiyaha barlamaanka oo loo doortay Jawaari.
Sidoo kale Xildhibaanada ayaa ku doodaya in Shariif Xasan uusan xafiiskiisa fadhiisan bilihii lasoo dhaafay isagoo wax walba ka hormariyay musharaxnimadiisii fashilantay.
Goorma ayay Mooshinka keeni doonaan Xildhibaanada?
Sida aan kasoo xiganay xubin la rumeysan karo oo kamid ah barlamaanka Koofur Galbeed, xilka qaadista ayaa lasoo jeedin doonaa todobaadka danbe, isla todobaadkaas ayayna xildhibaanada codka uqaadi doonaan
Maxaa laga filan karaa Shariif Xasan Sh Aadan ?
Shariif Xasan Sh Aadan oo ah siyaasi gal gal badan ayaa ku howlan sidii uu uga hortagi lahaa Mooshinkaas laga soo gudbinayo.
Wararkii ugu danbeeyay ee aan heleyno ayaa shegaya in Shariif Xasan uu casuumay qaar kamid ah golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada maamulkiisa si uu xaalada udajiyo.
Sidoo kale waxaa uu isha ku hayaa inuu xilka qaadis ku sameeyo qaar kamid ah wasiirada maamulkiisa kuwaas oo u ololeynaya in Shariif Xasan xilka laga qaado.
Miyay Shariif Xasan ku dhici kartaa Arintii Guuleed oo kale?
Shariif Xasan ayaanan ogolaan doonin iney ku dhacdo arin lamid ah tii ay xildhibaanada Galmudug xilka uga qaadeen Cabdi Kariim Xuseen Guuleed, Inkastoo uusan xilka qaadistaan aqbalin.
Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaanan xildhibaanada maamulkiisa u ogolaan doonin iney yeeshaan kulan uusan waxba ka ogeyn, sidoo kale ciidamo badan oo isaga udaacad ah ayaa udiyaarsan iney kulamada noocaas ah ka hortagaan.